डाक्टरहरुको हड्तालले बिरामीलाई मर्का - Himalayan Kangaroo
डाक्टरहरुको हड्तालले बिरामीलाई मर्का
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:३८ |
उपचार गर्ने डाक्टरहरु नै हड्तालमा उत्रिएपछि उपचारका लागि अस्पताल गएका विरामी र तीनका आफन्तहरुको बिचल्ली भएको छ ।
नया मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग राखेर अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द छन् । निजी अस्पतालमा बन्दको प्रभाव नपरे पनि गरीव जनताको पहुँचमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द भएपछि विरामीको बिचल्ली भएको हो ।
यता, मेडिकल काउन्सिललाइ माफिया काउन्सिल भएको भन्दै तालाबन्दी गर्न पुगेका विद्यार्थीमाथी प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । विभिन्न दश सुत्रीय माग राखेर एघार दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न दबाव दिन तालाबन्दी गर्न गएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रहरी हस्तक्षेपबाट डा. किशोर दत्त घाइते हुनुभएको छ । यसैबिच अनसनरत डा गोविन्द केसीका समर्थकले एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई घेराउ गर्दै अपशव्द प्रयोग गरेका छन् ।
निजी कामले शिक्षण अस्पतालको इएनटी बिभागमा पुगेका नेपाललाई फर्किने क्रममा केसीका समर्थकहरुले घेरा हालेको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ । सो क्रममा नेता नेपालले केसीका मागप्रति एमालेको बिरोध नरहेको भन्दै मनमोहनको नाममा हुने बिरोध एमालेलाई सैह्य नहुने बताउनुभएको थियो । विपीको नाममा अस्पताल मेडिकल कलेज खोल्दा समर्थन गर्ने, मनमोहनको नाममा नियतवस बिरोध गर्ने कुरा आफुहरुलाइ सह्य नहुने उहाले बताउनुभएको हो ।
Previousचीन भ्रमण फलदायी : यादव
Nextपूर्व गृहराज्यमन्त्री महेन्द्र राय यादवको निधन
१३ बैशाख २०७६, शुक्रबार २३:३१
प्राधिकरणलाई आम्दानीको हिसाब देखाउन निर्देशन
२१ माघ २०७३, शुक्रबार ०१:५१